Amasevisi - Guangzhou Longcheng Electronic Co., Ltd.
Isevisi Yekhwalithi Ephezulu
Sinikeza isikhathi sewaranti yonyaka owodwa kumakhasimende ethu.
Okwehadiwe:Uma kwenzeka i-hardware inomonakalo noma yehluleka phakathi nesikhathi sewaranti, sicela uxhumane nonjiniyela wethu wesevisi yamakhasimende noma umdayisi ngokushesha ukuze sikwazi ukuphendula esicelweni sakho futhi sixazulule izinkinga ezifanele.
Okwesofthiwe:Sinikeza isevisi yesofthiwe yamahhala yempilo yonke yawo wonke amakhasimende.Singakwazi ukuxazulula izinkinga zesofthiwe nesistimu ngendlela ekude ukuze siqinisekise ukusebenza okungenakukhathazeka.
Ngemuva kokuhlola yonke indawo nokuxazulula inkinga, sizohlinzeka ngokushintshanisa mahhala.Ukushintshwa okunjalo kuzolethwa yi-DHL noma i-FedEx ngokushesha.
Sibophezelekile ngezindleko eziqondile ngesikhathi sewaranti.
Isevisi Yekhasimende Nemithetho Yesiqinisekiso
• Sinikeza iwaranti yonyaka owodwa wehardware (ngaphandle kwezibuko ze-VR, izingxenye ezigqokwa ngokushesha, nomonakalo owenziwe umuntu) kanye nokugcinwa kwesoftware impilo yonke.
• Ithuluzi ngalinye lifakwe iphakethe lezingxenye ezigqokwa ngokushesha lapho lilethwa.
• Sihlinzeka ngosekelo lwempilo yonke lwemishini ukuze siqinisekise ukuthuthukiswa kwehadiwe, isistimu, nokuqukethwe.
• Isikhathi sewaranti siqala kusukela ngosuku impahla efika ngayo efekthri.Kunoma iyiphi ihadiwe engaphandle kwesikhathi sewaranti, intengo yezindleko zezingxenye ezifanele izokhokhiswa kuphela.
• Uma kwenzeka noma iyiphi ingxenye idinga ukukhandwa noma ukushintshwa, kufanele ubuyisele ingxenye eyonakele futhi ubhekane nezindleko zempahla.Sizoyibuyisela kuwe ngemva kokuqedwa kokulungiswa.
• Sicela uthinte isevisi yethu yamakhasimende ngokushesha uma kwenzeka into ehlulekayo.Ungayidilizi noma uyilungise uwedwa.Sicela wenze ukuhlola okukodwa noma ngaphezulu isinyathelo ngesinyathelo ngesiqondiso esivela kubasebenzi bethu besevisi yamakhasimende ukuze sikwazi ukunikeza isisombululo esithile ngemva kokuthola inkinga.Sinikeza imibiko yokwehluleka kwamahora angu-24 kanye nama-aphoyintimenti ukuze kulungiswe.Amahora okusebenza osekelo lwezobuchwepheshe ami kanje: 9:00 AM – 6:00 PM (Isikhathi saseBeijing).Uma udinga isevisi ngezinye izikhathi, sicela wenze i-aphoyintimenti nethimba langemva kokuthengisa kusengaphambili.
• Ngokwenkontileka yokuthenga, isikhathi sewaranti yonyaka owodwa siqala kusukela ngosuku esilethwe ngaso efekthri.
1. Ikhebuli ye-headphone eyodwa eyengeziwe (ngaphandle kwe-HTC VIVE) izothunyelwa nge-oda ngalinye mahhala.
2. Uma izingxenye eziphuka kalula zilimaza phakathi kwezinsuku ezingu-30 ngaphansi kokusetshenziswa okuvamile, sicabangela inkinga yazo yekhwalithi futhi sizojabulela inqubomgomo evamile yewaranti njengezinye izisekeli.
9:00 AM kuya ku-6:00 PM (isikhathi samaShayina)
NgeSonto - ngoMgqibelo (Uma udinga isevisi ngezinye izikhathi, sicela wenze i-aphoyintimenti nethimba langemuva kokuthengisa kusengaphambili)
Siyakwamukela ukuxhumana nathi!Nazi izindlela zokuxhumana nathi!
Faka i-WhatsApp ku:www.whatsapp.com